🥇 Ukubalwa kwemali nokulawulwa kwezinto zokuhamba
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 724
Ividiyo yokubalwa kwemali nokulawulwa kwezinto zokuhamba
Oda ukubalwa kwezimali nokulawulwa kwezinto zokuhamba
Ukubalwa kwezokuthutha ngohlelo lwethu lwe-USU-Soft universal kukusiza ukuthi ulawule zonke izici eziyinhloko zenkampani! Ukuhlelwa nokuphathwa kwezinto zokuhamba kwenziwa kohlelo olulodwa lokulawulwa kolwazi. Bonke abasebenzi benkampani bazosebenza kuyo njengengxenye yochungechunge olulodwa lwezobuchwepheshe. Uhlelo lwe-accounting lokulawulwa kwezinto zokuhamba lukhombisa imininingwane kokubili kumongo wama-oda ngamanye avela kumakhasimende, nokuthi ama-oda ahlanganiswe kanjani. Kuhlelo lokulawulwa kokuphathwa kwezokuthutha amalungelo athile okufinyelela anikezwa umsebenzisi ngamunye. Imigomo yokusebenza kanye nezindlela zohlelo lokulawula ukubalwa kwezindlela zezinto zokuhamba zingahluka ngokuya ngamakhasimende:
Umuntu kufanele akhumbule ukuthi ukubalwa kwezimali kwezokuthutha nakho kunezici zako. Ukuphathwa kwezokuthutha kungavumelaniswa newebhusayithi yenkampani kanye nezinye izinhlelo ezahlukahlukene. Ukuzenzakalela kokuhamba kwabagibeli nezimpahla kungumsebenzi obaluleke kakhulu kunoma imuphi umphathi, ngoba ama-oda, imali engenayo yenhlangano nenhlonipho yezinkampani ezisebenzisanayo kuncike kulokhu!
Ukulawulwa kwezinto zokuhamba kuqala ngokubambisana namakhasimende. Uhlelo lokusebenza esilunikezayo lineqoqo lamathuluzi wokuxhumana namakhasimende. Ngenxa yalokho, ungabanikeza izinsizakalo zakho ngendlela engcono kakhulu, ubashiye bonke benelisekile. Kukhona amathuba okubhalisa amaklayenti ngayo yonke imininingwane edingekayo, njengenombolo yokuxhumana nokunye. Lokhu kukuvumela ukuthi uxhumane namakhasimende akho, kanye nokuhlela imihlangano nezingxoxo. Ukuphathwa kokuthuthwa kwempahla nohlelo lokulawula lwe-USU-Soft kuqinisekisa ukuthi zonke izinhlelo zokusebenza azishiywa zinganakiwe, njengoba ngakunye kwazo kumakwe ngesimo: sokuqala, kuyaqhubeka, ukwenqaba, kuqediwe. Ungengeza futhi izimo eziningi ezengeziwe ngokucela kwekhasimende. Ukubalwa kwezimoto okuzenzakalelayo kwamazwe omhlaba kufaka ukwakheka kwemibhalo ehlukahlukene: izicelo, izinkontileka, njll. Isoftware yokuhambisa abagibeli inikeza ukufinyelela okulula ekuphathweni kokubika. Ukufakwa kohlelo lokuphathwa kwezimali kunikela kakhulu ekwandisweni kwesithunzi senhlangano yakho.
Ukuphathwa kwenhlangano ngohlelo lwe-USU-Soft nakho kunikeza ithuba lokulawula zonke izinqubo zomsebenzi. Ukuphathwa kwezezimali nakanjani kuzophumelela ngokwengeziwe ngokufakwa kohlelo lokubalwa kwezimali lokulawulwa kwezinto zokuhamba. Ukungeza kusethi ejwayelekile yezici, futhi sikunikeza ngamathuba ahlukahlukene. Ungalanda ukuhlelwa kwe-thematic mahhala kuwebhusayithi yethu. Uhlelo lwe-accounting lokulawulwa kwezinto zokuhamba lunikeza ukufinyelela okulula ekuphathweni kokubika, okuzokhulisa ukusebenza kahle kwayo yonke imisebenzi yebhizinisi. Ukuzenzakalela kwasemsebenzini ngohlelo lwethu lokusebenza kuthuthukisa umsebenzi wabasebenzi, okuzoba nomphumela omuhle ekwandiseni isisusa sabo. Inqubo yokwenza lezi zinhlelo zolwazi ezithuthukile kungumsebenzi obhekelekayo futhi odla isikhathi. Sikunikeza umkhiqizo wekhwalithi ephezulu! Ukuhlaziywa kokuphathwa okwenziwe ohlelweni lokulawulwa kwezimali kunikeza isithombe esinqunyiwe semisebenzi yesisebenzi ngasinye. Ukuthuthukiswa kwamasu ebhizinisi kuphumelela kakhulu futhi kulinganiselwe lapho kusetshenziswa uhlelo lokulawulwa kwezimali. Ukubalwa kwezimpahla kwe-Excel akunakwethenjelwa futhi kuyimfashini ngevolumu yamanje yebhizinisi. Uhlelo lokulawulwa kokubalwa kwemali alukuvumeli ukuthi usebenze ngolwazi, kepha futhi ulugcine ezinqolobaneni isikhathi eside osidingayo.
Ukungeza abasebenzisi abasha nokubanikeza amalungelo okufinyelela akuyona inqubo ende futhi eyinkimbinkimbi. Uhlelo lokulawulwa kwezokuthutha lubandakanya ukubalwa kwezimali kohlangothi lwezezimali lwesicelo ngasinye. Uma ufuna ukubhalisa noma yikuphi okunye ukuthengiselana kwezezimali okungaxhunyiwe kuhlelo lokusebenza oluthile ungakwenza kalula ngosizo lohlelo lwethu. Isoftware yokubala inezinye izinto eziningi ezithakazelisayo! Ungazizwela ngokwakho ngokulanda inguqulo yedemo yamahhala kuwebhusayithi yethu.
Ukuphathwa akuthembeki nje kuphela, kepha futhi kuyisimanje, ngoba isoftware ihlanganiswe cishe nazo zonke iziteshi zokuxhumana zanamuhla nezindlela zobuchwepheshe. Ukuhlanganiswa kwesoftware enamakhamera evidiyo kunikela ngokulawulwa okuzenzakalelayo kwevidiyo nokuqashelwa kwezimoto namakhasimende. Ukuhlanganiswa nemishini endlini yokugcina kuzosiza ukuvimbela ukwebiwa, futhi ukuxhumana newebhusayithi kanye ne-PBX kuyithuba lokuheha amakhasimende amasha. Imizila yezimpahla izodwetshwa ngokushesha futhi ngokunembe kakhudlwana, kuyilapho ongoti bezokwazi ukubheka inombolo engakholeki nenhlanganisela yezinto - isikhathi, uhlobo lokuthunyelwa, izidingo zezokuthutha, izifiso zamakhasimende. Ukuthunyelwa ngakunye nohlelo lwethu kungalawulwa kusukela ekuqaleni kwayo kuze kube sekugcineni. I-dispatcher izolandelela umthwalo osendleleni isebenzisa amamephu we-elekthronikhi futhi igxile kwimininingwane ye-geolocation. Abashayeli, bazi ukuthi bayabonakala, ngeke bephule umzila, isikhathi nemigomo. Uhlelo lokulawulwa kokubalwa kwemali lubala izindleko, izindleko zezinsizakalo zezimoto, kanye nempahla, kusetshenziswa amafomula afanele futhi anembile. Kungenzeka ngokwezinhlu zamanani ezahlukahlukene, ngamanani ahlukile, ngokwemibandela engayodwana enikezwa iklayenti elithile.
Isoftware ikuvumela ukuthi ngaso sonke isikhathi wenze ngokunembile noma yiziphi izibalo zobuchwepheshe, ngoba izinkomba zikagesi zizokwakhiwa kalula ohlelweni lokulawula. Izimoto ezisetshenziselwa ukuthutha zingachazwa ngokuya ngemininingwane yasefekthri, noma ungalanda imininingwane eyisithenjwa kunoma yiliphi ifayela elenziwa ngogesi bese ulifaka kwisoftware.